Korri guddaan kutaa ABO New Zealand milkiin xumuramee jira.
Nuti miseensonni ABO Kutaa NZ Kora guddaa kan bara 2009, Bitootessa 28 fi 29 magaalaa Aucklanditti gageefannee milkii fi injiifannoon xumurannee jirra. Kora kana haasa'aan kan banan DT kutaa NZ yeroo ta'u akkasumas bakka bu'oonni konyaa walduraa duubaan haasa'a godhanii jiru. walgahii kana irratti xiinxala haala yeroo fi fi gamaagamni hujjii waggaa godhaamee, filannoon kutaas godhamee jira.
Akkasumas kora gaafa 29/03/2009 gaggeefame irratti miseensa SHG ABO fi itti aanaan HD ABO J/Bultum Biyoo karaa tele conference dhaan haalaa qabsoon bilsummaa Oromoo yeroo ammaa irraa jiru ibsa bal'aa kennanii jiru.Gaaffii mana keessaa ka'eefis deebi'iin J/Bultumiin kennamee jira.
Kanumaan waliin walgahiin uummataas gaggeefamee jira, waltajjii mootummaan NZ waggaan qopheessu kan Auckland ethinic weekend jedhamu irratti hawaasni Oromoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan aadaan keenya boonsaa uummata hedduu duratti kan agarsiifame yoo tahu, sana boodaan dorgommiin kubbaa milaa Tuuta kubbaa milaa oromiyaan saboota NZ keessa jiraatu waliin gaggeefame haala boonsaan xumurame jira..
Murtii fi Kutannoolee Kora ABO NZ
1. Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii Addi Bilisummaa Oromoo biyya alaa fi keessatti bifa hundaan gaggeessaa jirru dinqisiifachaa, yoom iyyuu caalaatti jabinaan hojjeechuuf murteeffanneera.
2. ABOn haala rakkisaa ta’e keessaa ba’ee bifa tasgabbaa’aa ta’een sochii itti fufee caalaattuu jabeessuuf gara keenyaan waan nu irraa eegamu hundaa gumaachuuf murteeffanneerra. akkasumas uummanni oromoo bakka jiran hundaa akka jabaatan yaamicha goona.
3. Mootummaan TPLF uumurii aangoo isaa dheereffachuuf dhiiga dhangalaasaa jiru jabeessinee balaaleffanna. Shira Ummata Oromoo, saboota ollaa Oromoo jiiraatan waliin walitti buusuu ta'ee oromoota oromoota biraa waliin walitti buusuu fashaleesuufis waan dandeenyu maraa ni hojjenna.
4. Seeraa fi heera Dhaaba kabachiisuun hundee nageenya jaarmayaa tokkoo ti. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis seera-dhablummaa farra Qabsoo bilisummaa Ummata Oromoo waan ta’eef, dammaqinsaan ni eegna, murannooniis dura dhaabbanna.
5. Nuti miseensoonni ABO kutaa NZ keessa jiru murtii fi qajeelfama dhaabni keenya nutti keennu maraa fudhannee gara hojiitti jijjiiruuf ni hojjechuuf
Bitooteessa 30, 2009